रह्छ कि एक कसरत — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
प्रत्येक घटना को अन्त मा जब विजेता गरेको podiums मा विजयी खेलाडीहरूलाई उभिए, आफ्नो अनुहार मा मुस्कान र पदक आफ्नो चेस्ट मा आराम संग, तिनीहरूले प्रशिक्षण फाइदा reaping थिए. तर बाइबल अनुसार, त्यहाँ एक उच्च प्रकारको छ प्रशिक्षण-किनभने शारीरिक प्रशिक्षण मूल्यहीन छ, तर किनभने यो सीमित गर्नुपर्छ.
के तपाईंले कहिल्यै परमेश्वरको तपाईंको कसरत बारेमा सोच्छ के सोचेका छौं भने, यहाँ जवाफ छ: उहाँले यो लाभदायी छ सोच्छ, तर सीमित, मूल्य. तपाईं चलिरहेको गर्दा त, अभ्यास गरिरहेको, र उठाने वजन, यो के गर्न राम्रो कुरा हो कि ज्ञान आराम. राम्रो आकार मा आफ्नो शरीर राख्दै प्रशंसनीय-पनि बुद्धिमानी-तर छ यो केवल हालसम्म तपाईं प्राप्त गर्न गइरहेको छ.
यो प्रेरित पावलले तिमोथीलाई यसो भने के छ:
"तर irreverent र मुर्ख मिथक संग गर्न केही छ. बरु, godliness आफूलाई तालिम, शरीर को प्रशिक्षण को लागि एक सीमित लाभ छ, तर godliness हरेक तरिकामा लाभदायी छ, यो वर्तमान जीवनको लागि पनि जीवन आउन लागि प्रतिज्ञा धारण देखि." (1 तिमोथी 4:7-8)
हामी पावलको विचार अप जस्ता काम मा योग सक्छ: शारीरिक प्रशिक्षण राम्रो छ, तर आध्यात्मिक प्रशिक्षण राम्रो छ. अनि त्यो किनभने शारीरिक बल अस्थायी छ, godliness अनन्त हुँदा. पावलले "godliness लागि प्रशिक्षण" वार्ता जब म त्यो तपाईं आध्यात्मिक तवरमा बलियो बनाउन कुराहरू गरिरहेको अर्थ लाग्छ. यो भनेर थप ईश्वरीय बनाउन गतिविधिमा संलग्न अर्थ. शायद उठाने हाम्रो बाइबल भारोत्तोलन भन्दा पनि कम मनमोहक छ, तर यो बेवास्ता हामी राम्रो स्वास्थ्य भन्दा बढी मा बाहिर सम्झना अर्थ.
सधैंभरि एक क्षण भन्दा राम्रो छ
हामी सबै कुरा अब रहन्न जब यो थप मनमोहक छ भनेर थाहा. कुनै एक थाह यसलाई निम्न महिना बनाइदिन छौँ एक कार किन्छ. हामीले एक समय रहनेछ भन्ने कुरा किन्न चाहन्छु, हामी लगानीको थप प्राप्त किनभने. तर हामी त कार बारेमा निर्णयहरू गणना हुनुहुन्छ भने, हामी हाम्रो प्राण बारेमा धेरै गणना कसरी हुनुपर्छ?
आफ्नो सदाको बारेमा कसरी अक्सर लाग्छ? यो सत्य हो, हामी थप हामी भन्दा यसको बारेमा विचार गर्नुपर्छ. त्यहाँ हामी सबै सधैंभरि बाँच्न हुनेछ भन्ने कुनै प्रश्न छ; प्रश्न के सधैंभरि जस्तै हुनेछ छ. त्यसैले अब हामी निवेश गर्नुपर्छ, कि नतिजा कहिल्यै समाप्त हुनेछ थाह.
यो के हामी दिन दिन देखि ध्यान केन्द्रित असर पर्छ. खेल राम्रो हो, तर तिनीहरूले सबै हुनुहुन्न. आफ्नो शारीरिक बल कलेज मा तपाईं प्राप्त हुन सक्छ, तर यो आकाश मा तपाईं प्राप्त छैन. तपाईं आफ्नो शरीर को राम्रो हेरविचार गर्नुपर्छ, तर हामी हेरचाह गर्न weightier कुरा छ. कसरी स्वस्थ आफ्नो प्राण छ?
परमेश्वरले हामीलाई पापको जाने र येशूको पकड लो गरौं गर्दा "आध्यात्मिक मांसपेशी" निर्माण गर्न सक्षम. अनि त्यसपछि उहाँले हामीलाई जिम पठाउँछ. उहाँले graciously हामीलाई आफ्नो वचन दिएको गर्नुपर्छ, आफ्नो मान्छे, र पनि उसको कान. त्यसैले गरेको पढ्न अनुमति, संगति, र प्रार्थना. तिनीहरूले अगाडी खेल वा मिलान लागि तयार गर्न चाहनुहुन्छ किनभने खेलाडीहरूलाई कडा प्रशिक्षण. तिनीहरू एक उच्च स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ.
हामी सबै आध्यात्मिक परीक्षण सामना गर्नेछ, परीक्षा, र लडाई दैनिक. तपाईं तयार हुनुहुन्छ? Coasting खेलाडीहरूलाई लागि काम गर्दैन र यसले मसीहीहरूको लागि काम गर्ने छैन. गत वर्ष गरेको बाइबल पढाइ छैन पर्याप्त यस वर्ष तपाईं धान्न छ. हामी केवल परमेश्वरको अनुग्रह द्वारा यस म्याराथन मार्फत यो छौँ, तर उहाँले हाम्रो आध्यात्मिक व्यायाम मार्फत दौड लागि हामीलाई तयार.
जबकि शारीरिक प्रशिक्षण फाइदा सीमित छन् मलाई सम्झना गर्न को लागि यो उपयोगी छ, आध्यात्मिक प्रशिक्षण फाइदा असीमित छन्. ती दिन मा म परमेश्वरको वचन प्रार्थना वा पढेर जस्तै लाग्छ जब, म फाइदाको सानो वा अस्थायी छैन भनेर आफैलाई सम्झाउन सक्छ. यो मात्र होइन मलाई अर्को हप्ता मदत गर्नेछ, यो मलाई अर्को जीवनमा मदत गर्नेछ. त्यो म आवश्यक सबै प्रेरणा छ.
Theodora • मार्च 11, 2014 मा 10:40 छु • जवाफ
यो साँच्चै मलाई आशिष्…!!!धन्यवाद!!& परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष् दिनुहुन्छ….तपाईंले प्रयोग गर्न प्रभु अनुमति लागि धन्यवाद.
मत्ती Smethurst • मार्च 11, 2014 मा 10:42 छु • जवाफ
यो राम्रो शब्द को लागि धन्यवाद, यात्रा.
दानियल DryIce Reyes • मार्च 11, 2014 मा 10:44 छु • जवाफ
यात्रा तपाईं यस धन्यवाद. गत हप्ता को लागि म मृत्यु भय राख्ने गरिएको छ. मलाई थाहा छैन किन तर म के. म साँच्चै स्वर्ग कहिल्यै राम्रो कुरा हो कि सम्झाउन आवश्यक र यस पृथ्वीमा मलाई केहि प्राप्त हुनेछ.
vizlyfe • मार्च 11, 2014 मा 10:47 छु • जवाफ
यो अति उत्तम छ! धन्यवाद Fam! तपाईं एक जनावर!
GregBrown • मार्च 11, 2014 मा 11:06 छु • जवाफ
प्रोत्साहन को यो बिट को लागि धन्यवाद! हामीलाई केही स्वस्थ खाने र व्यायाम संग Obsessed बन्न लागि सजिलो छ. तर तपाईंले आफ्नो भोजन योजना थप समय खर्च गर्छन् र जिम मा, वचन प्रार्थना र अध्ययन को समयमा भन्दा? यसलाई आफ्नो प्राथमिकता भद्रगोल छ गर्न सजिलो छ, पनि मिशन फिल्ड मा.
सबै ख्रीष्टमा आशीर्वाद!
मत्ती • मार्च 11, 2014 मा 1:18 बजे • जवाफ
म सहमत छु. आध्यात्मिक फिटनेस / व्यायाम कुनै पनि शारीरिक फिटनेस / व्यायाम भन्दा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण छ, तर म पनि दुवै साथै एकै समयमा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्. मलाई थाहा त्यहाँ आफैलाई लागि बाहिर काम र परमेश्वरको लागि बाहिर काम बीच राम्रो लाइन छ, तर त्यहाँ फरक छ (यसलाई विश्वास गर या नगर). परमेश्वरको लागि बाहिर काम, शारीरिक, आध्यात्मिक तत्व समावेश. उदाहरण को रुपमा, तपाईं एक कसरत साझेदार हुँदा, तपाईं दुई कुरा समय समयमा तपाईं कसरत सँगै हुँदा. यदि कल्पना, जब तपाईं दुई कुरा, यो एक पंप बारेमा छैन, तपाईंको मांसपेशीमा, आदि. सट्टा, जब तपाईं कुरा, आफ्नो हृदय देखि बोल्न, र एक अर्को ख्रीष्टमा सङ्गति. शारीरिक काम बाहिर जिम मा ती लागि एक साधारण चासो हुन सक्छ, तर तपाईं आध्यात्मिक पक्ष थप्न यदि, एक unearthly स्तरमा गो आफ्नो फिटनेस (जहाँ हामी हुन मानिन्छ छन् दायाँ), ख्रीष्टको प्रेम फैलाउने. कलस्सी 3:17
केसी • मार्च 11, 2014 मा 1:34 बजे • जवाफ
यो प्रभु त्यसैले विभिन्न तरिकामा बोल्छ कसरी मलाई amazes. म को विचार संग कुस्ती थियो “म आज बाहिर काम गर्नुपर्छ” तर जस्तै म फेरि माथि र माथि यो क्षेत्र मा असफल र यो मेरो जीवनमा लगातार केही छैन भने यो समय बर्बाद गर्न सकिन्छ केहि महसुस महसुस भएको थियो. परमेश्वरले एउटा सम्झाउने यो ब्लग पढ्दै थियो उहाँले>म र मैले उहाँलाई ध्यान र आध्यात्मिक प्रशिक्षण, म यति राम्रो महसुस र यो बर्बाद समय छैन भनेर विश्वास. म रहन लाग्छ स्वस्थ महत्त्वपूर्ण छ तर म उहाँको वचन मा digging र उसलाई खोजिरहेका हाम्रो जीवनको हरेक दोस्रो तरिकाले लायक छ भनेर थाहा. परमेश्वरको समय कहिल्यै बर्बाद छ. के ख्रीष्टले तपाईंलाई साझेदारी गर्न भनिन्छ छ आज्ञा पालन को लागि धन्यवाद. म यो आवश्यक. भगवान तपाईं र तपाईंको परिवार यात्रा आशीर्वाद!
यात्रा ली • मार्च 11, 2014 मा 4:28 बजे • जवाफ
बिल्कुल, हरेक एक दोस्रो यसलाई लायक छ. खुसी तपाईं प्रोत्साहित गर्न सकिएन!
जेबी • मार्च 11, 2014 मा 2:00 बजे • जवाफ
राम्रो सामान ब्रो
adonai • मार्च 11, 2014 मा 3:18 बजे • जवाफ
हे यात्रा, ummm गहिरो प्रेरणादायी byitself thats
Donnell • मार्च 11, 2014 मा 3:43 बजे • जवाफ
मानिस यस तेजस्वी छ, म प्रेम तिमी के खडा. म आफ्नो पुस्तक आफ्नो संगीत मा आफ्नो शिक्षा सिक्नु र अब मन “असल जीवन”.
यात्रा ली • मार्च 11, 2014 मा 4:26 बजे • जवाफ
खुसी तपाईं प्रोत्साहित गर्न सकिएन. र मलाई आशा छ पुस्तक धेरै मार्गमा लागि उपयोगी हुन सक्छ!
MrsRondo • मार्च 11, 2014 मा 4:25 बजे • जवाफ
यो भयानक थियो. दुई कुराहरू म पाउन र यस वर्ष राख्ने आशा र अझै म अन्य भन्दा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण छ कि एक सङ्घर्ष. धन्यवाद यात्रा, तपाईंको समसामयिक ब्लग धेरै प्रेरक भएको, र तिनीहरूले निरन्तर मलाई सुपरस्टार फिर्ता दर्शाउन.
टि-केटा • मार्च 11, 2014 मा 5:16 बजे • जवाफ
Bro यस म आवश्यक के छ. म संघर्ष र दिन को अन्तिम जोडी को लागि आत्माको लडिरहेका गरिएको छ. बस प्रार्थना गर्न भूल, मेरो बाइबल पढ्न, र पनि चर्च जाने. यो एक वेक अप कल छ. अब देखि म ख्रीष्टमा एउटा परिवर्तन मानिस हुँ. म पनि परमेश्वरको N अब मेरो अभक्त जीवन मलाई सुन्न हुनेछ लाग्यो. येशूले मेरो लागि क्रूसमा मर्नुभयो र म म सधैं छु आफ्नो उपस्थिति मा स्वागत र उनले मेरो पाप मलाई माफ वफादार छ.
Bro म आफ्नो जीवन र ठूलो काम उहाँले तपाईं मार्फत गरिरहेको गर्नुपर्छ लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद. परमेश्वरले तपाईंलाई आफ्नो काम स्वीकार लागि आशीर्वाद.
धन्य मेरो भाइ रहन.
Keinya • मार्च 11, 2014 मा 5:31 बजे • जवाफ
राम्रो लिएको कुरा! धन्यवाद! = ओ)
RobJohnson • मार्च 11, 2014 मा 5:47 बजे • जवाफ
आशिष् र यो उत्प्रेरित. धन्यवाद यात्रा!
liam • मार्च 12, 2014 मा 12:00 छु • जवाफ
सधैं आफ्नो पोस्ट यात्रा सही समयमा मलाई पुग्न. परमेश्वरले तपाईंलाई मेरो साथी मार्फत काम दिँदै राख्न
यहोशू Galvin • मार्च 12, 2014 मा 2:18 छु • जवाफ
पक्कै यो ब्रो आवश्यक. को प्रोत्साहन को लागि धन्यवाद.
मिस्त्री • मार्च 12, 2014 मा 3:28 छु • जवाफ
deeeeep struff यात्रा, हामी सामान्यतया कुरा छैन केहि. कृपया, तपाईंको पोष्ट आउँदै राख्न.
Vicmonyi • मार्च 12, 2014 मा 1:06 बजे • जवाफ
tirsit • मार्च 13, 2014 मा 12:26 बजे • जवाफ
यो म मा आफैलाई अनुकूल छु कि मेरो जीवन हो, भगवान वाई यात्रा आशिष् दिनुहुन्छ!!
माटो • मार्च 13, 2014 मा 12:35 बजे • जवाफ
रेने • मार्च 13, 2014 मा 9:54 बजे • जवाफ
समय भाइ दायाँ. धन्यवाद! परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष!
sophie • मार्च 19, 2014 मा 5:14 बजे • जवाफ
आमिन. यो सन्देश पठाउनका लागि धन्यवाद. हामी सबै यसको आवश्यकता. प्रशंसा परमेश्वरले.
E_Jay • मार्च 24, 2014 मा 2:09 छु • जवाफ
भगवान तपाईं यस आशीर्वाद।. म तपाईंलाई आवश्यकता को yur समयमा प्रेरणा र प्रोत्साहन पाउन प्रार्थना… आमिन
Nia • मार्च 24, 2014 मा 7:13 बजे • जवाफ
राम्रो सामाग्री. ठूलो पद.
सुलेमान • मार्च 26, 2014 मा 6:55 बजे • जवाफ
प्रभु यात्रा गर्न आफ्नो विश्वसनीयता लागि धन्यवाद. म दोस्रो पुस्तक लेख्न आवश्यक लाग्छ.
LoganLong • अप्रिल 1, 2014 मा 11:45 छु • जवाफ
म यो आज हाम्रो संस्कृति धेरै सान्दर्भिक छ लाग्छ. कसरी अक्सर तपाईं घण्टा जिम मा मान्छे देख्नुहुन्न? यात्रा, म वायएमसीए मा काम र म बाहिर काम कम्तिमा एक घण्टा मा नै मान्छे दिन र दिन बाहिर हेर्न, तर साधारण भन्दा बढी. र यो तपाईं सोच हुन्छ, त्यहाँ शायद भन्ने मेरो वाई आउन मसीहीहरूको धेरै (हामी इन्डियाना मा सबै भन्दा ठूलो हुनुहुन्छ), त्यसैले तिनीहरू कति खेर फालेका छन् 1-2 घण्टा एक दिन आध्यात्मिक गतिविधिमा आफूलाई आकर्षक? यो मलाई सान्दर्भिक छ यो बाहिर कल किनभने म शारीरिक र आध्यात्मिक आकार फिर्ता प्राप्त गर्न आवश्यक. धन्यवाद भाई.
Marjorie • अप्रिल 2, 2014 मा 12:20 छु • जवाफ
आमिन, यो सम्झौटो लागि धन्यवाद!
Oritsegbemi • अप्रिल 17, 2014 मा 6:39 छु • जवाफ
यो समय एक शब्द छ! परमेश्वरको आशिष!
जोश • अप्रिल 26, 2014 मा 4:38 छु • जवाफ
यो शब्द-लागि-एक-सिजन छ. त्यहाँ राम्रो हेर्न धेरै सामाजिक दबाबको छन् एक संस्कृति र मान्छे को लागि फिट र 'शौकीन' हुन, हामी प्राप्त त्यसैले हामी जस्तै हुनुपर्छ लाग्छ के मा पुगियो गर्न सक्नुहुन्छ, के अरूको हामीलाई भन्नुहोस् हामी जस्तो गर्न आवश्यक.
परमेश्वरको कसरत मूल्य सीमित गरेको सोच्छ भन्दै स्थान मा छ, परमेश्वर खर्च गर्न सक्छन् सदाको तुलनामा.
उहाँले शमूएल द्वारा राजा अभिषिक्त भएको बेला यो दाऊदको कथा मलाई सम्झना दिलाउँछ 1 शमूएल 16). भगवान पद मा भन्छन् 7, “मान्छे बाहिरी उपस्थिति हेर्न, तर प्रभु हृदय मा देखिन्छ।”
तिमीलाई आशिर्वाद रहोस्,
MannyRuiz • सक्छ 17, 2014 मा 2:05 छु • जवाफ
साँच्चै उत्साहजनक यात्रा! नजिक परमेश्वरको मलाई हुन्छ कुनै कुरा साँच्चै मलाई आनन्द दिन्छ र मलाई बलियो! त्यसैले तपाईं मानिस धन्यवाद. म तपाईंलाई कदर. म तपाईं को लागि प्रार्थना राख्न छौँ :)
liam • जुन 21, 2014 मा 10:27 छु • जवाफ
यात्रा म बाहिर काम मा ठूलो हुँ, तर म एक गर्दा हरेक पटक आफैलाई यो पोस्ट पढ्न सम्झाउने छ. मलाई साँच्चै मामलाहरु के केन्द्रित राख्न मद्दत गर्छ
ब्रायन • जुलाई 4, 2014 मा 9:33 छु • जवाफ
वाह सँगी ब्लगर रूपमा म यो सामग्री प्रेम. म एक कसरत शौकीन छु तर कहिले काँही दैनिक मेरो शब्द टिप्न समय फेला भन्दा सजिलो आउँछ. जस्तै मैले गर्नुपर्छ म परीक्षा गर्न खडा गर्छन् म किन त आश्चर्य. उत्कृष्ट रिमाइन्डर. धन्यवाद यात्रा
gnocchi • जुलाई 21, 2014 मा 6:22 बजे • जवाफ
यो वास्तवमा उत्साहजनक छ र यो मेरो मन मा भएको कुरा भएको छ. म मेरो बाइबल दैनिक पढ्न छैन, वास्तबमा, म जान सक्छ2वा3परमेश्वरको वचन संग सम्पर्कमा रही बिना दिन…तर अब म आफैलाई अनन्त लाभ इन्कार छु भनेर थाहा. यसलाई के म पढ्न आज मलाई अर्को हप्ता वा अर्को महिना गर्न मद्दत गर्नेछ मलाई धेरै अर्थ. म गत वर्ष गरे के भर सक्दैन, वा अन्तिम हप्ता…म मेरो सदाको लागि बाहिर काम गरिरहेको छु!!
Godliness वर्तमान जीवन र आउन जीवन दुवै लागि प्रतिज्ञा समातेर सबै कुरामा मूल्य छ!
धन्यवाद यात्रा ली, तपाईं मार्फत परमेश्वरले काम दिँदै लागि…Imma वचन थप पढ्नुहोस्! :)
दबोरा • नोभेम्बर 20, 2014 मा 12:26 बजे • जवाफ
यो पोस्ट प्रेम! म व्यायाम प्रेम & म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु तर म मेरो आध्यात्मिक फिटनेस मेरो प्राथमिकता हो भनेर थाहा.
Ngosa • अप्रिल 14, 2015 मा 6:33 बजे • जवाफ
कि उत्कृष्ट सन्देश यात्रा थियो, म सधैं बाहिर काम गलत वा छैन वा बस अनावश्यक छ कि छैन भनेर छक्क परे छ. आफ्नो विश्लेषण एक मा हावा खाली. भिडियो ट्यूटोरियल, BRAGING bro राख्न!!